Tsy mbola voazara ny CLD : tsy maintsy laniana mialoha ny faran’ny taona | NewsMada
Mahavariana ny fomba fiasan’ny fanjakana. Atao ren-tany ren-danitra fa nankatoavin’ny fanjakana ny famatsiambola 200 tapitrisa Ar isaky ny distrika, tafiditra ao anatin’ny Komitim-paritry ny fampandrosoana (CLD). Nivory mikasika izany ny distrika sy ny kaominina isanisany, ary natsangana ny vaomieran’ny CLD tarihin’ny solombavambahoaka voafidy isan –toerana.
Nambaran’ny ben’ny Tanàna vitsivitsy fa tsy mbola tonga eny anivon’ny distrika ny vola sy ny kaominina ny vola, nefa tsy maintsy laniana amin’ity taona ity. Satria efa voasoratra anaty tetibolan’ny distrika sy ny kaominina isanisany ny hampiasana ny vola, ary ao anatin’izany ny CLD.
Sao hiverina ny tany Ambohimahamasina
Ankehitriny, mbola hiadin-kevitra indray izany matoa natsangana ity vaomiera tarihin’ny depiote ity. Dinihina ny laharampahamehana, ny fotodrafitrasa hatsangana na harenina, ny fomba izarana ny vola na atao mitovy isaky ny kaominina na isam-pokontany, na arakaraka ny tetibidin’ny fotodrafitrasa hatao.
Andrasana, araka ireo, ny hamoahan’ny fanjakana ny tena nampiasan’ireo distrika sy kaominina ny vola, mba tsy hisian’ny resabe toy ny tany Ambohimahamasina Ambalavao, niantsoana mpanara-maso ny vola avy amin’ny fanjakana (IGE), ka izy ireo indray no voasazy.